အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုမော်ကွန်းတိုက် 30 ၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း (စာမျက်နှာ 30)
The New မြက်ချိုင့် BroadcastAsia 2014 များအတွက် Readies!
လအတိတ်လက်တဆုပ်စာ The New မြက် Valley- တစ်ဦးက Belden အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်! လာမည့် BroadcastAsia 2014 Marina Bay Sands သည်စင်္ကာပူ, ဇွန်လ 17th-20th မှာကျင်းပလျက်ရှိ exhibit- စဉ်အတွင်း GV အဆုံးအသုံးပြုသူမှဆောင်တတ်၏သောကတိကအမှန်တကယ်မိတ်ဆက်ပြသလိမ့်မည်! ဤတွင်အတွက်မြက်ချိုင့်ဖွင့်ထံတော်မှမျှော်လင့်သောအရာကိုတစ်ဦးအမြန်ကြည့်မယ့် ...
motionVFX: Apple က Motion Templates ကို၏မူရင်းနေအိမ်
ဝိုး! motionVFX post ကိုအဘို့သင့် VFX နှင့်ဂရပ်ဖစ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖန်တီးထားပြီး Apple က Motion Templates ကိုတက်အဆိုပါအထင်ကြီးလိုင်းကယ့်ကိုက "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လာကြတယ်" သင်၏စီမံကိန်းကိုလိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့! ထိုကဲ့သို့သော AppleMotion, FCPX Plugins တွေကို, အကျိုးသက်ရောက်မှုတင်းပလိတ်များပြီးနောက်, နှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ 4D တင်းပလိတ်များအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို formats များကို motionVFX သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်အခြေစိုက်စခန်းများဖုံးလွှမ်းရှိပါတယ်! ဤတွင်ကြောင်းဆက်ဆက်အနည်းငယ်အထုပ်ဒြပ်စင်များမှာ ...
အဆိုပါ CV500-ကို MB-2 မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် Mini ကို-အသံလွှင့်ကင်မရာလာကြတယ်အများကြီး pack မှာ!
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်အသစ်ဒီဇိုင်း 2nd မျိုးဆက် CV ကို-500-ကို MB-2 HD ကို-SDI Mini ကိုအသံလွှင့်ကင်မရာကိုကြာရှည်ခံမှု, ဘက်စုံ, နည်းပညာ compatibility နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်ခဲ့သည်! အဆိုပါ CV ကို-500-ကို MB-2 ထိုကဲ့သို့သော Wide Dynamic Range (WDR), Extreme အနိမျ့အလင်းအာရုံ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆူညံသံလျှော့ချရေး (2.2D + 2D), အလိုအလျောက် White Balance, ဒစ်ဂျစ်တယ် Defog အဖြစ်မဟုတ်ဘဲကောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုကိုတိုးမြှင့် features တွေပါတဲ့3megapixel CMOS sensor ကိုထည့်သွင်း , အော်တိုနေ့ / ည, ကိုယ်ရေးမျက်နှာဖုံး, ဒစ်ဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးများနှင့် ...
တစ်ဦးက high-resolution အပေါ်ကိုယူ ...
high-resolution (သို့မဟုတ် "Hi-res") ဖြစ်ကောင်းစဉ်ပိုင်အတွက်စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှသောသူမည်သည်၏နှုတ်ခမ်းပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာဘာကိုအမြဲတမ်းအဘို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိမြင့်မား resolution ကိုရှိရလိမ့်မည်။ 4K ပြီးသားအထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဆောင်သောသူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်နေစဉ် ...
အဆိုပါနဂါးကုန်းပေါ်ရောက်နေခဲ့ဖူး: #NABShow ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Up ကို IS သောအနီရောင်နဂါး
အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအားဖြင့်အနီရောင်နဂါးသုံးသပ်နှင့်ဤကင်မရာကိုစားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်တတ်၏, စကားလုံးနှစ်လုံးစိတ်ထဲလာသောအရာကိုမြင်လျှင်လိုက်တဲ့အခါ: "! ရိုးရိုးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်" ဟုတ်တယ်, အနီရောင်နှစ်ပေါင်းအတိတ်၏သူတို့၏ "အစွန်းဖြတ်တောက်မီ" ထိုးဖောက်ပေါ်တွင်တင်တည်းခိုသည်မဟုတ်, သူတို့က သူတို့ကစျေးကွက်အရပျမြားနှငျ့ချမှတ်ခြင်းအပေါ်မြင့်မားတဲ့အဆုံးနည်းပညာကိုတစ်ဦးအလွန် "sexy" အပိုင်းအစချပြီးနေကြတယ် ... ပိုပြီးယူလာနေကြသည် ...
အဆိုပါ Avid ဆက်စပ်မှုတွေ | ပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် #NABShow ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Up ကို
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်သက်သေပြနည်းပညာနှင့်အတူဖောက်သည်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဗဟိုမီဒီယာ Access ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ယခု avid ဆက်စပ်မှုတွေနှင့်အတူအောင်မြင်လျက်ရှိသည်များအတွက်အစဉ်အဆက်ကြီးထွားလာလိုအပ် | ပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်! Avid နည်းပညာမှာရှေးရှေးတိုင်းပံ့ပိုး, စက်ရုံ, ပထဝီတည်နေရာ interlink ကြောင်း workflow နှင့်အလယ်ပိုင်းမော်ကွန်းတိုက်တည်ဆောက်မယ့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ခက်ခဲများနှင့်မဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ကြပါပြီ ...
ဒါဟာရုံးဖွင့်: #NABShow ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Up ကိုမှာကြေညာ Sony က 4K a7s DSLR
အတော်များများကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဆရာက ISO4မြင့်မားအရောင်သစ္စာ, 409,600K HDMI ဗီဒီယိုကို output ကိုနှင့် 4fps / 120p မှတ်တမ်းတင်အထိ ultra-high sensitivity ကိုထုတ်လုပ်မယ့် 720K DSLR ကင်မရာကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသည်။ SONY ဆက်ဆက်သူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်လူကြိုက်များအပြည့်အဝ frame ကိုမှန်-လျော့နည်းကင်မရာလိုင်းမှာကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ကြေငြာချက်မှ 4K နည်းပညာ၏ဤအံ့သြဖွယ်အပိုင်းအစထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကြီးမားတဲ့မျိုးစုံဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ...
နောက်ဆုံးပေါ် View မှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ: Avid high resolution Workflows အဖြူရောင်စက္ကူ
30 ၏စာမျက်နှာ 37«ပထမဦးစွာ...1020«2829303132 » ...နောက်ဆုံး»